Saturday, 12 Jan, 2019 2:00 PM
म मस्कोमा विद्यार्थीछँदा संयोगवश त्यो ठाउँमा डेरा लिएर बसेको थिएँ, जहाँ केही सन्देहास्पद इज्जत भएका महिलाहरूसँगै एउटी आइमाई बस्थी । ऊ पोल्यान्डेली थिई । उसलाई सबैले टेरेसा भन्थे ।
ऊ अग्ली–अग्ली थिई, श्याम–वर्णकी, कपाल कालो, आँखीभौँ बाक्लो, मोहोडा लाम्चो र रुखो, बन्चरोको पासोमा मुखाकृति खोपेको जस्तो देखिन्थी । जनावरको जस्तो ट्वाल्ल परेका आँखा, घोर स्वर, ट्याक्सी ड्राइभरको जस्तो हिँडाइ, अजङको मांसल, माझी हुनलायक देखिन्थी ऊ । उसको त्यो स्वरुपले ममा घृणा उत्पन्न गराएको थियो । म त्यो घरको सिरानको तलामा बस्थेँ । मेरो कोठाको सामुन्ने थियो उसको माथिल्लो तलो । ऊ घर बसेको छ भन्ने थाहा पाएको दिन मैले कहिल्यै आफ्नो ढोका खुला राखिनँ, यद्दपी त्यस्तो घटना आक्कल-झुक्कल मात्र भएको थियो ।
कहिलेकहीं संयोगवश भरयाङमा अथवा आँगनमा उसित मेरो जम्काभेट हुन्थ्यो र त्यतिखेर ऊ मलाई हेरेर यसरी मुस्कुराउँथी, उसको मुस्कुराहटमा धुर्त्याइँ र सन्देह लुकेको छर्लङ्गै देखिन्थ्यो । कहिलेकहीं मैले उसलाई रक्सी लागेको अवस्थामा पनि भेटेको थिएँ— आधा खुलेका आँखा, छिरलिएको कपाल र विशेषतः विद्रोही मुस्कुराहट हुन्थ्यो त्यति बेला । त्यस्तो अवस्थामा ऊ मलाई यसो भन्थी—“हेलो विद्यार्थीजी, नमस्ते !” अनि, त्यतिखेर ऊप्रतिको मेरो घृणाभावमाथि उसको सिल्ली अट्टहास अझ बढी केन्द्रित हुन्थ्यो । ऊसितको जम्काभेट र अभिवादन सामना गर्नु नपरोस् भन्नका निम्ति डेरा सर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा लागेको थियो, तर मेरो सानो कोठो असाध्यै लोभलाग्दो थियो । मेरो झ्यालबाट ज्यादै विराट दृश्य देखिन्थ्यो । टोल शान्त थियो । त्यसैले मैले यी सब कुरा सहेर बसेको थिएँ ।
मैले उसको अनुहार हेरेँ । ऊ थोरै डराइरहेकी थिई । उसका औँलाहरू काँपिरहेका थिए । पहिले त मेरा आँखा अलिकता धमिलिएका थिए, तर त्यसपछि यो कसरी भयो भन्नेबारे मैले अडकल काटेँ र भनेँ—“लौ सुन्नुस्, भद्र महिला, यहाँ बोलेस वा टेरेसा कोही पनि छैनन् । तपाईं मसित एकपछि अर्को झूटो कुरा गर्दैहुनुहुन्छ । तपाईं अबदेखि मलाई कचकच गर्न नआउनुस् ! तपाईंको मित्रको निम्ति के कसो गर्नुगराउनु छ त्यो मलाई मतलब छैन, कुरो बुझ्नुभो ?”
साँच्ची, मानवजन्तुले जतिजति तीतो चाख्दै जान्छ, त्यतित्यति उसमा जीवनप्रतिको मीठो भोक जाग्दै जान्छ । यौन–नैतिकताको टालोले लपेटिएका, अरुको सम्बन्धमा आफ्नो आत्मविश्वासको धमिलो चश्माले गढेर हर्ने भएका हामीजस्ताको वशीकृत सार्वलौकिक पवित्रताले यो कुरो बुझ्न सक्तैन । फलतः हाम्रा यावत कुरा अत्यन्तै निर्दयी र मूर्खतापूर्ण बन्न पुग्छन् । हामी तल्लो वर्ग भन्छौँ, स्खलित वर्गको कुरा गर्छौँ तर त्यो तल्लो वर्ग कुन हो, म बुझ्न चाहन्छु ? सर्वप्रथम सबै हामीजस्तै मानव हुन्, हाड़मासु, रगत र नसाद्वारा निर्मित जीव हुन् । युगौँदेखि हामीले यो कुरो सुन्दै आएका छौँ । वास्तवमा, हामी सुन्छौँ, तर यी सब कुरा कति भयावह विद्रोही छन् भन्नेबारे कसलाई थाहा होला ! कतै हामी मानवताबारे उच्च स्वरमा उपदेश दिँदै हिँड्ने अनैतिक पाखण्डी त होइनौँ ? यथार्थमा, हामी पनि स्खलित जन्तु हौँ । जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, हामी हाम्रो उच्चताभासप्रतिको (अन्ध) विश्वास र दृढविश्वासको गहिरो खाडलमा नराम्ररी जाकिएका छौँ । यस्ता कुराहरू यथेष्ट भइसके । यी सब कुरा पहाडजस्तै पुराना भइसके, कति पुरानो भने यसबारे बोल्नसमेत लाज भैसक्यो । वास्तवमा, यो पनि त्यही प्राचीन प्रसङ्ग हो।